Jereo ny valan-javaboahary Torres del Paine any Chile | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Shily, General, Inona no ho hita
El National Park Torres del Paine Sehatra voajanahary izy io ary faritra ala voaaro any Silia. Any amin'ny faritanin'i Ultima Esperanza no misy azy ary eo anelanelan'ny tendrombohitra Andes sy ilay Steppe Patagonian malaza. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ny toerana fitsidihana indrindra any Chile izy io ary faritra voajanahary voaaro izay manan-danja lehibe ao amin'ny firenena.
Ho hitantsika eo inona no azo atao sy hita ao amin'ity valan-javaboary voajanahary tsy mampino ity avy any Torres del Paine, izay manana faritra tsara tarehy be. Androany dia toerana natokana ho an'ny fizahantany izy io, noho izany dia manolotra serivisy tsara sy traikefa miavaka.
1 Tantaran'ny zaridaina voajanahary
3 Farihy Sarmiento
4 Lagoon mangidy
5 Farihy Gray
6 Glacier volondavenona
7 Cave Milodon
8 Hitsambikina lehibe
Tantaran'ny zaridaina voajanahary
Ity toerana ity dia nonenan'ny taona maro lasa izay vazimba teratany fantatra amin'ny anarana hoe Aonkienk na Tehuelches. Ity vazimba teratany ity dia nandany taonjato maro tao amin'ilay faritra, mandra-pahatongan'ny Tandrefana tonga tany amin'ilay faritra tamin'ny taonjato faha-1959. Nahatonga azy ireo hamindra toerana ireo vazimba teratany mandra-pialany ary nanjary lany tamingana tany amin'ilay faritra ihany. Efa tany am-piandohan'ny taonjato faha-1978 dia nanomboka nohararaotina ity faritra ity mba hiompy biby fiompy sy ho an'ny asa fambolena, izay misy velaran-tany maro hektara. Ny fiandohan'ny fiarovana ny valan-javaboary dia tsy tonga raha tsy tamin'ny enimpolo taona, miaraka amina fampielezan-kevitra marobe mba hampitsaharana ny fanararaotana ilay faritra. Raha ny fitsipika dia napetraka faritra arovana kely izay nitarina miandalana mandra-pahatongany any amin'ny habeny ankehitriny. Ny valan-javaboary dia noforonina tamin'ny XNUMX fa ny fetrany ankehitriny dia tratra tamin'ny taona XNUMX. Tamin'ny XNUMX dia nambaran'ny UNESCO ho Biosfir Reserve.
Ity zaridaina ity dia misy 154 kilometatra miala ny tanànan'ny Puerto Natales. Amin'ity valan-javaboary ity dia afaka mankafy ny voajanahary voaaro sy ny endrika manala anao ianao. Misarika ny saina ireo masibe lehibe manome ny anarany ny valan-javaboary, saingy mbola betsaka noho izany, satria amin'ity faritra ity dia afaka mitsidika farihy maro toa an'i Sarmiento ianao, iceberg, ala ary pampas lehibe.
Este farihy vokarin'ny orana ao amin'ny faritra dia manana loko manga mahery. Ao amin'ny sisin-tany fotsy izay hita eo amoron-dranomasina dia manana tantara lava isika, miaraka amin'ireo fôsily karbonika karbonika velona izay niforona tamin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany, izany hoe an'arivony taona maro lasa izay. Ny lalana mamaky ny farihy dia mahitsy, ary misy tendrombohitra any aoriana, ka tsy dia sarotra loatra.
Ity lagoon ity nahazo ny anarany avy amin'ny rano PH avo manana tsiro mangidy izy ireo. Iray amin'ireo sary tsy mampino amin'ity valan-javaboary ity izy, satria eo am-pototry ny Cerro Toro no misy azy, ary misy tendrombohitra ambadiky ny tendrombohitra. Ny farihy dia toy ny fitaratra lehibe taratra an'ireo tendrombohitra tsara tarehy ireo, ka tena mahavariana ny vokany. Dia an-tongotra adiny roa miala ny lagoon Sarmiento ary amin'ity toerana ity dia azo atao indraindray ny mahita vorona toy ny flamingo.
Lake Gray dia mety ho mitsidika amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-tongotra hafa amin'ny alàlan'ny valan-javaboary. Miampita ny reniranon'i Pingo ianao amin'ny alàlan'ny tetezana mihantona ary tonga any anaty ala ianao mba hahitana eo am-paran'ny sisa tavela amin'ilay glacier lehibe izay eo akaiky eo. Ao amin'ity faritry ny farihy glacial ity dia misy fomba fijery vato eo an-tampony izay manome fomba fijery mahatalanjona izay tsy hay hadinoina ho an'ny mpitsidika.
Este glacier tsara tarehy nanjavona tsikelikely isan-taona, noho izany dia tena ilaina ny hahafahana mankasitraka azy faran'izay haingana. Any akaikin'ny Farihy Gray no misy azy ary misy fijerena glacier mahita azy. Misy ihany koa ny fitsangantsanganana an-tsambo hahita azy akaiky, zavatra mahavariana kokoa. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fitsidihana tena ilaina tany Torres del Paine.
Amin'ity faritra ity, androany dia navadika ho tsangambato nasionaly, hita ny taolambalon'ilay Milodon taloha. Mandeha amin'ny lalan-tongotra ianao izay mankany amin'ny fidirana amin'ny lava-bato izay nahitana ireo taolam-paty tranainy ireo. Ao amin'ny iray amin'ireo fomba fijery dia misy mylodon hazo.
Manodidina ny farihy iray hafa ao amin'ity valan-javaboary ity, farihy Pehoé, dia tonga ianao a riandrano lehibe antsoina hoe Salto Grande. Folo metatra ny haavon'ilay riandrano ary mankany amin'ilay farihy voalaza etsy ambony. Manana rano manga izy ary tsara tarehy be ny toerana na dia mbola azonao jerena ihany aza ny sisa tavela amin'ny afo lehibe tamin'ny 2011 izay mbola tsy namboarina ny natiora. Amin'ity faritra ity dia azonao atao ny miditra amin'ny fomba fijery mba hankafizanao ny fahitana ny riandrano.
Fitsidihana iray hafa izay Ny tsy maintsy jerena dia ny fomba fijerin'i Cuernos, miaraka amin'ny dia an-tongotra adiny iray izay hitondra antsika amin'ny fomba fijery tsara indrindra amin'ilay fantatra amin'ny anarana hoe Cuernos del Paine. Ireo tendrombohitra manome ny anarany ny valan-javaboary dia mahatalanjona sy tena tsara tarehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Torres del Paine
Inona no ho hita any Kyoto
Cala Xarraca, zorony mahafinaritra any Ibiza